दुई कम्पनीका मधुमेह र दुखाइमा प्रयोग गर्ने औषधि कम गुणस्तरका, ९ औषधि पसललाई कारबाही – Health Post Nepal
२०७५ फागुन १४ गते ९:५८
न्यून गुणस्तरका औषधि उत्पादन तथा विक्री–वितरणको बिगबिगी भइरहँदा औषधि व्यवस्था विभागले गुणस्तरहीन औषधि विक्री–वितरणमा संलग्न औषधि उद्योग तथा पसलहरूलाई कारबाही गरेको छ । विभिन्न ५ जिल्लाका ९ औषधि पसललाई कारबाही गरेको औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले बताए । उनका अनुसार कास्कीका ४, भक्तपुरका २, काठमाडौंको १, तनहुँको १ र म्याग्दीको १ औषधि पसल कारबाहीमा परेका हुन् ।
विभागको आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक प्रतिवेदनअनुसार यसअवधिमा विभागले न्यून गुणस्तरका औषधि उत्पादन गर्ने दुई कम्पनीलाई बजारबाट औषधि फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । एक स्वदेशी र एक विदेशी औषधि उत्पादक कम्पनीका न्यून गुणस्तरका औषधि बजारबाट रिकलका लागि पठाइएको विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मधुमेहरोगमा प्रयोग गरिने नेपाल फर्मास्युटिकल ल्याबरोटरी प्रालि जितपुर, वीरगन्जले उत्पादन गरेको फोरमिन–जी १४० नामक औषधि रिकलका लागि विभागले सूचना पठाएको हो । त्यसैगरी, भारतको विन मेडिकेयर प्रालि मोदिपुरमले उत्पादन गरेको –२५०११०, डिकमोल नामक दुखाइ कम गर्न प्रयोग गरिने औषधि न्यून गुणस्तरको पाइएकाले विभागले पत्रपत्रिकामा समेत सूचना जारी गरी रिकलका लागि निर्देशन दिएको छ ।
विभागले समय–समयमा गुणस्तरहीन औषधि उत्पादन तथा विक्री–वितरण गर्ने विभिन्न औषधि कम्पनी तथा उद्योगलाई गरेको कारबाहीले औषधिको गुणस्तर कायम राख्न सहयोग पुगेको महानिर्देशक ढकालको भनाइ छ । रिकलका लागि सूचना पाएपश्चात् तोकिएको समयभित्र त्यस्ता औषधि फिर्ता नगर्ने औषधि पसल र कम्पनीलाई विभागले दिएको सञ्चालन अनुमति रद्द गर्ने महानिर्देशक ढकालले बताए ।
न्यून गुणस्तरका औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई कारबाही, औषधि जफत तथा कतिपय अवस्थामा निलम्बन नै गरिने विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले बताए । विभागले समय–समयमा गुणस्तरहीन औषधि उत्पादन तथा विक्री–वितरण गर्ने विभिन्न औषधि कम्पनी तथा उद्योगलाई गरेको कारबाहीले औषधिको गुणस्तर कायम राख्न सहयोग पुगेको महानिर्देशक ढकालको भनाइ छ । रिकलका लागि सूचना पाएपश्चात् तोकिएको समयभित्र त्यस्ता औषधि फिर्ता नगर्ने औषधि पसल र कम्पनीलाई विभागले दिएको सञ्चालन अनुमति रद्द गर्ने महानिर्देशक ढकालले बताए । बजार अनुगमनका क्रममा न्यून गुणस्तरको पाइएका औषधि उत्पादक कम्पनीलाई कारबाही गर्न औषधि व्यवस्था विभागले नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्छ ।
तोकिएको मापदण्ड पूरा नभएका तथा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्नेखालका त्यस्ता औषधिको सेवनले रोग निको हुनुको साटो झन्–झन् बढ्दै जाने भएकाले त्यस्ता औषधि उद्योग तथा विक्री–वितरकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक रहेको सूचना अधिकारी केसी बताउँछन् । उनका अनुसार विभागले गुणस्तरहीन औषधि उत्पादक तथा विक्री–वितरक कम्पनीहरूको सूची बनाई उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरेको छ ।
कुन–कुन परे कारबाहीमा ?
कारबाहीमा परेका कास्कीका औषधि पसलमा पालुङटार फार्मेसी, आभास आयुर्वेदिक फर्मा, अधिकारी मेडिसिन सप्लायर्स र सृष्टि मेडिकल हल छन् । म्याग्दीको आचार्य मेडिकल हल र तनहुँको एलेक्सा मेडिकल हल पनि विभागको कारबाहीमा परेका छन् । त्यसैगरी, भक्तपुरको एकै वडाका दुई फार्मेसीलाई विभागले कारबाही गरेको छ । सूर्यविनायक नगरपालिका–१ का अरनिको हाइवे पोलिक्लिनिक प्रालिको फार्मेसी र अर्बिसा फार्मेसी कारबाहीमा परेका हुन् । त्यस्तै, काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाको एभठिडे फार्मेसी पनि विभागको कारबाहीमा परेको छ ।
म्याग्दीको आचार्य मेडिकल हललाई भने विभागले २१ दिनका लागि औषधि विक्री–वितरणमा रोक लगाएको छ । बाँकी पाँच फार्मेसी सबैभन्दा कम १५ दिनको कारबाहीमा परेका छन् । कास्कीका सबै औषधि पसलहरू पालुङटार, आभास, अधिकारी र सृष्टिलाई १५ दिन सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । त्यसैगरी, तनहुँको एलेक्सा मेडिकल हल पनि १५ दिनको कारबाहीमा परेको छ ।
१५ देखि ८० दिन सञ्चालनमा रोक, कसलाई कति ?
कारबाहीमा परेका औषधि पसलहरूलाई विभागले कसुरअनुसार १५ देखि ८० दिनसम्म औषधि विक्री–वितरणमा रोक लगाएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी कारबाही भोग्नेमा काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकास्थित एभठिडे फार्मेसी छ । एभठिडेलाई विभागले ८० दिनका लागि औषधि विक्री–वितरणमा रोक लगाएको हो । त्यसपछि बढी कारबाही भोग्नेमा भक्तपुरका दुई फार्मेसी छन् । सूर्यविनायक–१ का अरनिको हाइवे पोलिक्लिनिक र अर्बिसा फार्मेसीलाई ७५ दिनका लागि सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो ।